यसरी बनिन् सनी लियोनी पोर्नस्टार - IAUA
पोर्नस्टार हुँदै बलिउड अभिनेत्री बनेकी सनी लियोनीलाई पोर्नस्टारलाई समाजले नायिकाको दर्जा दिँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। पोर्नस्टारलाई समाजमा हेयका दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने कुरा उनलाई राम्रोसँग हेक्का छ। यो सबै थाहा हुँदाहुँदै सनी आखिर किन पोर्नस्टार बनिन् ? सनीसँग के भएको थियो र उनले यस्तो कदम उठाइन?
Previous Previous post: पोर्नस्टार भनेपछि बा आमा रिसाए
Next Next post: के यिनै हुन नेपालका १० धनी व्यक्ति, जसलाई लक्ष्मीको आर्शिवाद मिलिरहेको छ